Jawaab La'aantaadu Waxay Burburineysaa Istaraatiijiyaddaada Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Jawaab La'aantaadu Waxay Burburineysaa Istaraatiijiyaddaada Warbaahinta Bulshada
Dadkuna Bishkiish, shirkad ka caawisa noocyada waaweyn istiraatiijiyadooda bulsheed, mobilada iyo dhijitaalka ah waxay isku keeneen macluumaadkan oo siinaya aragti ku saabsan arrin weyn oo ku saabsan warbaahinta bulshada. Noocyada badankood waxay u maleynayaan inay bixiyaan adeeg macmiil oo ka sarreeya warbaahinta bulshada laakiin xaqiiqda ayaa ah taas 92% macaamiisha ayaa diiddan!
Xaashida Horay ayaan u sheegnay laakiin shirkado aad u tiro badan ayaa go'aansaday inay u adeegsadaan warbaahinta bulshada suuqgeynta oo aysan haysan habka adeegga macaamiisha ee horumarsan. Wax macno ah ma leh sida weyn ee qorshahaaga baraha bulshada uu yahay marka ay macaamiishaadu bilaabaan inay si aad ah ugu dhawaaqaan maqnaashaha la'aantaada daryeelida dhibaatooyinkooda. Istaraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah oo aad moodeysay inay shaqeyn doonto hadda waa la xukumay maadaama dhagaystayaashu ay kaliya arkayaan in adeeggaaga macaamiil nuugayo.
Dabcan, caksiga waa run sidoo kale. Shirkadaha jawaabta bixiya oo shaqada qabsada waxay awoodaan inay kor u qaadaan qadarinta macaamiishooda internetka. Midkee ayaad u maleyneysaa inuu saameyn ku yeelan doono dadaalkaaga hanashada?
Tags: noocyadakalluunwaqtiga jawaabjawaabidadeegga macaamiisha bulshadawarbaahinta bulshadajawaabta warbaahinta bulshada
MeetingHero: App loogu talagalay Kulan wax soo saar
Jun 10, 2014 saacadu markay ahayd 9:02 AM
Post weyn Doug !! Waad ku mahadsantahay wadaagistaada!